Maitiro Ekubvisa Chipikiri Chipikiri Kubva Pfekero - Iwo Akanakisa Matipi Uye Matipi | Bezzia
Maitiro ekubvisa chipikiri chechipikiri kubva muhembe
Susana godoy | 03/06/2021 14:00 | Runako
Enamel ndidzo protagonists kuti dzikwanise kuratidza iwo akanakisa manicure. Isu tinovasanganisa nemavara uye mapatani asi tisingazvizive, dzimwe nguva tinogona kudonhedza donhwe rawo. Iwe unoziva here kubvisa mbambo mbambo kubva pambatya? Tisati takanda maoko edu kumusoro kwedu uye tofunga kuti zvese zvarasika, isu tine zvakawanda zvekukuudza.
Nokuti kubvisa polish kubva muhembe kunogona kunge kuchinetsa, asi isu tichabudirira. Haufanire kutaura zvakanaka kune yako yaunofarira hembe kana bhurugwa nekuda kwekuti chipikiri chako chadonha. Iwe unongofanirwa kubheja pane anotevera matanho uye madiki atinawo ako!
1 Maitiro ekubvisa polish kubva pambatya pasina acetone
1.1 Nepepa rinopinza
1.2 Isa chimedu chechando
1.3 Zvipembenene zvinodzinga
1.5 Talcum upfu
2 Maitiro ekubvisa polish kubva pasofa yemucheka
3 Maitiro ekubvisa polish kubva kupolyester zvipfeko
4 Maitiro ekubvisa chipikiri chechipikiri kubva pambatya nekukurumidza
Maitiro ekubvisa polish kubva pambatya pasina acetone
Ichokwadi kuti kana tichida kubvisa nzara, tinoshandira acetone. Nekuti mune imwechete yekuenda ndipo patinozoonekana nemavara kana dhizaini kana chimiro manicure uyo akanga atiperekedza. Asi mune ino kesi isu tiri kutaura nezve zvipfeko, machira uye isu tinoda kungwarira zvishoma navo. Saka mune ino yekutanga poindi, isu tichaona sei kubvisa chipikiri chechipikiri kubva muhembe pasina acetone. Nyora zvese pasi nekuti ivo vachakushandira iwe zvakanyanya!
Kana iyo polish ichangodonha izvozvi uye ichiri yakanyorova, saka chaunogona kuita kuisa napkin kana chidimbu chepepa rinobata kwazvo pairi. Izvi zvinokonzeresa kuti pendi izadze bepa. uye zviri nyore kubvisa kubva pamucheka wako. Asi chenjera, usadhonza kana kukwiza nekuti ipapo unozoparadzira iyo enamel. Nechiitiko ichi iwe unobvisa huwandu hwakawanda, asi izvo hazvireve kuti iwe unofanirwa kusuka geza nemvura inodziya.
Isa chimedu chechando
Kana banga racho ranyorova, sezvatangoona, zvakajairika kuti rinogona kupararira zvishoma. Naizvozvo, zvinogara zviri nani kuyedza kuomesa. Tingazviita sei? Kuisa chimedu chechando chakaputirwa mumuchekacompress. Kana iwe ukaona kuti ichiomarara, unogona kukwenya nechipikiri chako zvishoma uye zvishoma nezvishoma wobvisa iwo matanda aanosiya.
Hongu, iyo pfapfaidzo yatinogara tiinayo patinenge tichida kubvisa zvipembenene, inogona zvakare kuve shamwari yedu yepamoyo kubvisa enamel kubva pambatya. Chinhu chakanakisa chaungaite zora zvishoma kumucheka kana bhurasho remazino rausingachashandise. Ipapo, ichave nekupuruzira pachivara, asi usingapfuuri mugungwa kana jasi riri kutaurwa riine kusimba.
Nenzira imwecheteyo sepfapfaidzo yezvipembenene, inosvika imwe yemishonga yakanyanya kukosha. Nekuti ndezve kubheja pane mamwe eedu atinayo kumba akadai sekusveta bvudzi. Maitiro acho akafanana neambotaurwa, nekuti isu tichafanirwa kuisa lacquer diki tobva tazora. Iwe unogona kuzviita zvakare pabhurosi rezino kuti uwane migumisiro iri nani.
Imwe yemishonga inokurudzirwa ndeiyi. Paunenge watobvisa zvakawandisa asi banga racho haribude, ipapo isa imwe talcum powder. Regai igare usiku humwe uye mangwana acho uchachipa bhurasho nyoro uye wogeza nguo senguva dzose.
Tichaedza kusazora zvakawandisa mune chero mamiriro ezvinhu uye toedza kutanga pane diki nzvimbo yehembe, kana ikaramba zvakanaka kune zvimwe zvinongedzo. Saka nenzira iyoyo hatizvikanganise.
Maitiro ekubvisa polish kubva pasofa yemucheka
Zvipfeko ndizvo protagonist, hongu, asi Chii chinoitika kana iwe uchipenda nzara dzako pasofa uye kudonha kusinganzwisisike kunodonha? Chokwadi zvakaitika kwauri nekuti tiri kutoona kumeso kwawakaita paunenge uchiverenga. Zvakanaka, kune mamwe matanho aunofanirwa kufunga nezvazvo kana zvikaitika zvakare:
Kana iwe ukaona kuti yakangodonha, saka isu tichafanirwa kudaro bvisa zvakanyanya sezvinobvira. Ndokunge, iwe unogona kuzviita nerubatsiro rwetanda reorenji kana kunyangwe chipunu chauinacho paruoko.
Ipapo rangarira hunyengeri hwepepa. Unozoisa pachivara asi pasina kukwiza kuitira kuti irambe ichipinza.
Iwe unogona kudzikisira zvishoma jira remberi Chenesa neicho chakasarudzika chigadzirwa. Tichaita izvi kana chivara chisisina mvura.
Acetone inogara iri mhinduro yakanaka kurwisa enamel mavara, asi kwete nguva dzose kumachira. Nekudaro, zvakanakisa kutanga kuyedza mukona isingaonekwe. Iwe unomirira kuti iome uye kana iwe ukaona kuti hapana chinoitika, zvinyorovese bhora redonje uye zvinyoronyoro dab pachivara. Usazvidhonza! Edza kuve nemoyo murefu uye dzokorora maitiro. Ive nekuchenjerera, kana jira rakakuvadzwa pawakayedza, wobva wasarudza yekubvisa acetone-isina mbambo yekubvisa.
Iko kusanganiswa kwesoda yekubika nemvura zvakare zvakakwana pasofa uye ayo enamel mavara. Unonyorovesa jira mukati maro wobva waripuruzira pamusoro pechivara kuti ripinze nzwara. Zvishoma nezvishoma uchaona kuti zvinonyangarika sei. Iye zvino iwe unoziva kubvisa chipikiri chechipikiri kubva muhembe!
Maitiro ekubvisa polish kubva kupolyester zvipfeko
Une chokwadi sei iwe watoziva kare, patinotaura nezve polyester tinoigadzira kubva kune yekugadzira fiber inova yakajairika uye inoshandiswa mhando yerudzi. Saka zvinogona zvakare kuti nguvo iri mubvunzo yatakashatisa inogadzirwa nemucheka wakataurwa. Ipapo isu ticha bheja pane inokurumidza uye yakavimbika nzira. Asi chenjera, isu tinofanirwa kugara tichinyatso tarisa pazvinyorwa uye edza munzvimbo diki kuti tisazoshamiswa neminiti yekupedzisira.
Mune ino kesi, regai tingoisa donhwe reacetone pachivara. Sezvo ingori iyo huwandu ichave yakakwana kuvhara iyo enamel. Nekukurumidza izvo zvatichaita kupukuta nejira rakaoma kuitira kuti ripinze iyo enamel. Ndokunge, tinowedzera acetone tobva tachiomesa nejira riya. Nguva dzose uchidzivirira kuparadzira tsvina mberi. Kana iwe ukaona kuti haina kunyatso siya, unogona kugara uchiita zvakafanana asi hydrogen peroxide. Hongu, ndeimwe yesarudzo idzo dzisingashande kumachira ese, sezvo isu tave kutopindura, asi zvinofanirwa kuzivikanwa kuti kana tichigona kuishandisa, mhedzisiro yacho ichatishamisa kupfuura nakare kose. Imwe nzira kana imwe, iwe uchave unokwanisa kutaura zvakanaka kune urwu rudzi rwebanga, asi dzimwe nguva, isu tinofanirwa kuve tinoramba tichishingirira.
Maitiro ekubvisa chipikiri chechipikiri kubva pambatya nekukurumidza
Sezvatiri kuona, kumhanya hakuwanzo kutiperekedza mumatambiro akafanana neanhasi. Dzimwe nguva isu tinofanirwa kudzokorora maitiro kusvikira pasisina chiratidzo. Nekudaro, iyi pfungwa ichatibatsira zvakanyanya. Isa mamwe anoputira mapepa mapepa uye pamusoro pavo chipfeko chakatarisa pasi. Ndokunge, necivara chakanangana nematehwe anotaurwa. Zvakare uye kune rimwe divi, isu tiri kuzopasa donje bhora riine zvishoma acetone kana hydrogen peroxide. Iwe uchafanirwa kuzviita kanoverengeka kusvikira iwe waona kuti iyo enamel haisisina mavara naputi, nekuti yanyangarika. Zvakadaro, shandisa chinobvisa stain uye geza hembe senguva dzose. Iwe une chero hunyengeri hwaunoda kupa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Maitiro ekubvisa chipikiri chechipikiri kubva muhembe
9 hovhorosi yekuwedzera kuwadhiropu yako muzhizha
Dzakanakisa nhau dzemimhanzi dzemwedzi waJune